पशुपतिनाथ Archives - Lokpati.com
Tag - पशुपतिनाथ
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने काम नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। अन्तरकालीन आदेशमा फागुन १७ गतेलाई दुवै...
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमुनि सुनको जलहरी राख्नुअघि चाँदीको जलहरी मर्मतका लागि क्षमापूजा शुरु भएको छ । क्षमापूजा गर्न दक्षिण भारतबाट २५ ब्राह्मणलाई आमन्त्रण गरिएको छ । क्षमापूजामा ९६ नेपाली...
आर्यघाटमा शव जलाउँदा लाग्ने शूल्क बढ्यो, कति पुग्याे ?
काठमाडौं, ६ कात्तिक। पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउँदा लाग्ने शूल्क बढेकाे छ। पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पशुपतिस्थित घाट सेवा केन्द्रका कामदारहरुको माग सम्बोधन भएसँगै साे शूल्क बढेकाे...
माग पूरा भएपछि आर्यघाटका कामदारले लिए आन्दाेलन फिर्ता
काठमाडौं, ६ कात्तिक । पशुपति आर्यघाटमा शव जलाउने कामदारहरुले आन्दाेलन फिर्ता गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आर्यघाटमा शव जलाउनेलगायतका कार्यमा संलग्न घाट सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउने सहमति...
५६ वर्षमा पशुपतिनाथको सुन कति ?
काठमाडौं, २३ जेठ । धर्म हुने भन्दै पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन्। चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने पनि हुँदा रहेछन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो पाइएको छ। २०४५...
नेकपाद्वारा ओली पक्षका ७ नेतामाथि कारबाही